Ch 10 Mark – 2trondro
Home / Baiboly / Filazantsaran'i Marka / Ch 10 Mark
10:1 Ary nitsangana, dia niala teo ho any amin'ny faritra Jodia an-dafin'i Jordana. Ary indray, ny vahoaka niangona teo anatrehany. Ary araka izay efa zatra nanao, indray nampianatra azy ireo.
10:2 Ary manatona, ny Fariseo nanontany azy, naka fanahy Azy: "Mety va ny lehilahy mba handroaka ny vadiny?"
10:3 Fa ho setrin'ny, dia hoy izy taminy, "Inona no Mosesy hampianatra anao?"
10:4 Ary hoy izy ireo:, "Mosesy dia nanome alalana hanoratra taratasy fisaoram-bady sy ny handroaka azy."
10:5 Fa Jesosy namaly tamin'ny hoe:: "Izany dia noho ny hamafin 'ny fonareo no nanoratany izany fa didy ho anareo.
10:6 Fa hatramin'ny fony vao ny famoronana, Andriamanitra nahary azy ho lahy sy vavy.
10:7 Noho io, ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny, ary izy no hiraikitra amin'ny vadiny.
10:8 Ary amin'izy roa lahy ireto dia ho nofo iray ihany amin'ny. Ary noho izany, izy ireo ankehitriny, tsy roa, fa nofo iray ihany.
10:9 Noho izany, izay, izay nampiraisin'Andriamanitra, aoka tsy hampisarahin'olona. "
10:10 Ary indray, tao an-trano, ny mpianany nanontany azy momba ny toy izany.
10:11 Ary hoy Izy taminy:: "Na iza na iza Laviny araka ny vadiny, ka manambady olon-kafa, dia mijangajanga ka manala-baraka ny vadiny.
10:12 Ary raha misy vehivavy Laviny araka ny vadiny, ary dia manambady olon-kafa, dia mijangajanga izy. "
10:13 Ary dia nentina tany aminy ny zaza madinika, ka dia Jesosy mba hotendreny;. Fa ny mpianatra nananatra ireo izay nitondra azy.
10:14 Ary Jesosy nahalala izany, dia naka fahatafintohinana, ary hoy izy taminy: "Avelao ny ankizy madinika hanatona Ahy,, ary aza mandrara azy. Fa an'ny toa tahaka izany dia ny fanjakan'Andriamanitra.
10:15 Amen Lazaiko aminareo, na iza na iza no tsy hanaiky ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. "
10:16 Sy nanohona azy, ary nametra-tanana taminy, nitso-drano azy.
10:17 Ary rehefa niala teny an-dalana, ny anankiray, nihazakazaka ka niankohoka ka, nanontany azy, "Mpampianatra tsara, Inona no hataoko, ka mba hahazoana ny fiainana mandrakizay?"
10:18 Fa hoy Jesosy taminy:, "Nahoana no miantso ahy tsara? Tsy misy tsara afa-tsy ny iray ihany Andriamanitra.
10:19 Fantatrao ny didy: "Aza manitsakitsa-bady. Aza mamono. Aza mangalatra. Aza miteny vavolombelona mandainga. Aza mamita-. Hajao ny rainao sy ny reninao. "
10:20 Fa ho setrin'ny, hoy izy taminy:, "Mpampianatra, izany rehetra izany dia efa notandremako hatry ny fony mbola kely. "
10:21 Avy eo Jesosy, nandinika azy, tia azy, ka hoy izy taminy:: "Zavatra iray loha no tsy ampy aminao. Mandehana, amidio izay rehetra anananao, ka omeo ny mahantra, ary dia hanana rakitra any an-danitra. Ary avy, Araho aho."
10:22 Fa dia niverina tsy nankany hampalahelo, rehefa tena malahelo noho ny teny. Fa maro ny fananany.
10:23 Ary Jesosy, nijery manodidina, nilaza tamin'ny mpianany, "Tena sarotra izany ho an'ireo izay manan-karena mba hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra!"
10:24 Ary ny mpianatra dia gaga tamin'ny teniny. Fa Jesosy, namaly indray, hoy izy taminy: "Little lahy, Inona no sarotra fa ho an'ireo izay matoky ny vola hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra!
10:25 Moramora kokoa ny hidiran'ny rameva amin'ny hamaky ny fanjaitra, noho ny manan-karena ny miditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. "
10:26 Ary gaga kokoa, hoe niresaka, "Iza, avy eo, afaka ny ho voavonjy?"
10:27 Ary Jesosy, mijery azy ireo, nanao hoe:: "Raha amin'ny olona, ​​dia zavatra tsy hainy; fa tsy amin'Andriamanitra. Fa amin 'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. "
10:28 Ary Petera niteny tamin'izay aminy, "Indro, izahay efa nahafoy ny zavatra rehetra ka nanaraka anao. "
10:29 Ho setrin'izany, Hoy i Jesosy: "Amen Lazaiko aminareo, Tsy misy olona efa nahafoy trano ambadiky, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na ankizy, na ny tany, noho ny amiko sy noho ny Filazantsara,
10:30 izay tsy handray zato heny, amin'izao andro ankehitriny izao: trano, sy ny rahalahiny, sy anabavy, sy ny reny, sy ny ankizy, sy ny tany, mbamin'ny fanenjehana, ary amin'ny taona ho avy ny fiainana mandrakizay.
10:31 Nefa maro ny voalohany no ho farany, ary izay farany no ho voalohany. "
10:32 Ankehitriny dia teny an-dalana niakatra ho any Jerosalema. Ary Jesosy nandeha nialoha azy, Dia talanjona. Ary ireo izay nanaraka Azy dia natahotra. Ary indray, maka kely roa ambin'ny folo lahy, dia nilaza taminy izay efa hanjo Azy.
10:33 "Fa indro, isika miakatra ho any Jerosalema, ary ny Zanak'olona dia hatolotra eo an-mpitarika ny mpisorona, ary ny mpanora-dalàna, ary ny anti-panahy. Ary dia hohelohiny ho faty, dia hanolotra azy eo an-jentilisa.
10:34 Ary hanao Azy ho fihomehezana izy ireo, dralehilahy, dia handrora azy, sy hikapoka Azy, ary namono azy ho faty. Ary amin'ny andro fahatelo, dia hitsangana Izy. "
10:35 Ary Jakoba sy Jaona, ny zanak'i Zebedio, nanatona azy, nanao hoe:, "Mpampianatra, maniry isika fa na inona na inona, dia mangataka, no ho ataony ho antsika. "
10:36 Fa hoy Izy taminy:, "Inona no tianareo hataoko ho anareo?"
10:37 Ary hoy izy ireo:, "Mba avelao ho antsika mba hipetraka, ny iray eo ankavanany ary ny anankiray ho eo amin'ny ankavianao, any amin'ny voninahitrao. "
10:38 Fa hoy Jesosy taminy:: "Tsy fantatrareo izay angatahinareo. Hainareo va ny hisotro avy amin'ny chalice izay sotroiko, na ny hatao batisa amin'ny batisa izay aho mba hatao batisa?"
10:39 Fa hoy ireo taminy:, "Hainay." Ary hoy i Jesoa taminy: "Tokoa, ianao no hisotro avy ny chalice, avy izay misotro; ary ianao dia hatao batisa amin'ny batisa, izay aho mba hatao batisa.
10:40 Fa ny hipetraka eo ankavanako, na eo ankaviako,, dia tsy Ahy ny hanome ho anao, fa dia ho ireo izay nanamboarana izany no homena. "
10:41 Ary ny folo, rehefa nandre izany, nanomboka ho tezitra Jakoba sy Jaona.
10:42 Fa Jesosy, miantso azy ireo, hoy izy taminy: "Fantatrareo fa ireo izay toa mba ho mpitarika hanjaka ao amin'ny jentilisa izy ireo, ary ny mpitarika mifehy azy.
10:43 Fa tsy mba ho toy izany kosa eo aminareo izany. Fa tsy, na iza na iza no ho lehibe kokoa dia ho mpanompo anareo;
10:44 ary na iza na iza no ho ambony indrindra aminareo dia ho mpanompon'i rehetra.
10:45 Noho izany, koa, ny Zanak'olona tsy tonga mba tiany hanompo azy, fa mba hanompo, ka nety koa izy hanome ny ainy ho fanavotana ny maro. "
10:46 Ary izy ireo nankany Jeriko. Ary raha vao nilentika nivoaka tao Jeriko Jesosy mbamin'ny mpianany sy ny vahoaka maro be, Bartimeo, ny zanak'i Timeo, ny jamba, nipetraka nangataka teo amoron-dalana.
10:47 Ary rehefa reny fa i Jesosy avy any Nazareta, dia nanomboka nitaraina sy ny hoe, "Jesosy, Zanak'i Davida, mamindrà fo amiko. "
10:48 Ary maro dia nananatra azy mba hangina. Fa izy rehetra niantso mafy vao mainka, "Zanak'i Davida, mamindrà fo amiko. "
10:49 Ary Jesosy, nitsangana mbola, Nandidy azy hantsoina hoe. Fa ireo nanasa ny jamba, nanao taminy hoe:: "Aoka ho ao amin'ny fiadanana. Mitsangàna. Izy no miantso anao. "
10:50 Sady namoaka kely ny lambany, dia niantoraka ka nankany aminy.
10:51 Ary ho setrin'ny, Fa hoy Jesosy taminy, "Inona no tadiavinao, hataoko ho anao?"Ary ilay jamba nanao taminy, "Master, mba ho hitako. "
10:52 Dia hoy Jesosy taminy:, "Mandehana, ny finoanao no nahasitrana anao manontolo. "Ary niaraka tamin'izay dia nahita, ary nanaraka azy teny an-dalana.